Real Gaming - Page 61 of 88 - Just another WordPress site
ဖုန်း နဲ့ ကွန်ပျူတာ တို့ရဲ့ အန္တရာယ်မှ သင့်မျက်လုံးကို ကာကွယ်နိုင်သော လွယ်ကူသည့် နည်း (၁၀) နည်း လူအများစုသည် မျက်စိကို ကာကွယ်သည့် မျက်မှန်များ တပ်ဆင်ခြင်းမရှိဘဲ Laptop, Tablet နှင့် Smart Phone အစရှိသော digital ပစ္စည်းများရှေ့တွင် အချိန်တော်တော်များများ သုံးကြပါသည်။ ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကတော့ ထိုသူများသည် ၎င်းပစ္စည်းများက မျက်စိကို ဒုက္ခပေးသည်ကို မသိရှိခြင်းပဲ ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတို့က ဒုက္ခပေးတာကို သိကြသူများကလည်း မျက်စိများကို ကာကွယ်ပေးနိုင်သော လွယ်ကူသည့်နည်းလမ်းများရှိကြောင်းကို မသိကြပါ။ မျက်စိ များကို ကာကွယ်လိုပါက သင့်ဒီဂျစ်တယ်ပစ္စည်းများကို လွှင့်မပစ်ရပါဘဲနှင့် သင့် နေ့စဉ်ပုံမှန်လှုပ်ရှားမှုတွေထဲသို့ ထည့်သွင်း နိုင်သော လွယ်ကူသည့် …
တနင်္ဂနွေသား/သမီးတွေ အပျင်းကြီးတယ် ဒါပေမဲ့ ချစ်ဖို့တော့ကောင်းတယ်
တနင်္ဂနွေသား/သမီးတွေ အပျင်းကြီးတယ် ဒါပေမဲ့ ချစ်ဖို့တော့ကောင်းတယ် ဘယ်လောက် ပျင်းသလဲ ဆို ရင် ပျင်းဖို့တောင် ပျင်း နေတဲ့ သူတွေ။ ဉာဏ် ကောင်းတယ်။ အခြား သူတွေ အမြင် မှာတော့ လူလိမ္မာ လေး။ အိမ်မှာ ဆို အော် ကြောလန်။ ချောတာ မျိုးမ ဟုတ်ဘူး။ ချစ်ဖို့ ကောင်း ကြ တယ်။ မသိ တဲ့ လူ တွေ နဲ့ကျ ရင်တော့ ရုပ်တည် ကြီးနဲ့ မာနကြီး တဲ့ ပုံ ။ တကယ့် အကြောင်း သိ သူ ငယ်ချင်း တွေ ကြားထဲ …
Fb သုံးနေတဲ့ ညီလေး ၊ ညီမလေး ၊ သားသား၊ မီးမီးလေးတွေ့ သိဖို့……ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ထားပါ
Fb သုံးနေတဲ့ ညီလေး ၊ ညီမလေး ၊ သားသား၊ မီးမီးလေးတွေ့ သိဖို့……ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ထားပါ Fb သုံးနေတဲ့ ညီလေး ၊ ညီမလေး ၊ သားသား၊ မီးမီးလေးတွေ့ သိဖို့ “Facebook သုံးရင်ဒါတွေ သတိထားပြီး ရှောင်စေချင်ပါတယ်” (၁)ပုံတွေခဏခဏ မတင်ပါနဲ့ ပုံတွေ ခဏခဏတင်ရင် လူတစ်ချို့က ကိုယ့်ကို တစ်မျိုးမြင်လာ နိူင်ပြီး မလိုလား အပ်တဲ့ လူမှုရေးပြဿ နာ တွေ ကြုံလာ တတ်ပါ တယ်။ (၂)အပျော်သဘောနဲ့ အဓိပ္ပါယ်မဲ့ status တွေသိပ် မတင်ပါနဲ့ Facebook ဆိုတာ များသော အားဖြင့် တစ်ယောက်မျက်နှာ တစ်ယောက်မြင်ဖူးနေ တာမျိုး …
အမျိုးသမီးများတွင် ရှိတတ်သော ထင်ရှားသည့်မှဲ့ (၇)မျိုး အကြောင်း ဒီလိုပါ ခင်ဗျာ။ မိန်းကလေးတွေမှာ ထင်ရှားတဲ့ မှဲ့ (၇)မျိုးရှိတယ်လို့ မှဲ့နဲ့ပါတ်သက်တဲ့ ကျမ်းတွေမှာ ဆိုကြပါတယ်။ အဓိက မှဲ့တွေပေါ့။ အဲဒီ မှဲ့ (၇)မျိုးက ဘာတွေလဲဆိုတော့ …. ရတနာရွှေအိုးလို့ ခေါ်တဲ့ မှဲ့ရယ်။ ရတနာဆီမီးထွန်းဆိုတဲ့ မှဲ့ရယ်။ မျက်ရည်ခံမှဲ့ရယ် (ဘယ်ဘက်) မျက်ရည်ခံမှဲ့ကြီး (ညာရယ်) နှုတ်တဆိတ်ဆိုတဲ့ မှဲ့ရယ်။ ရွှေပိတုန်းစုပ်ဆိုတဲ့ မှဲ့ရယ်။ စံပယ်တင် (ညာဘက်) မှဲ့ရယ်ဆိုပြီး အမျိုးသမီးတွေအတွက် အထင်ကရ မှဲ့ (၇)မျိုးရှိတယ်။ ၁-ရတနာရွှေအိုးမှဲ့ အဲဒီမှာ ရင်ဘတ်အလယ်မှာ ထင်ထင်ရှားရှား မှဲ့တစ်လုံးတည်း ထင်းထင်းကြီး ရှိနေတယ်ဆိုရင် အဲဒီမှဲ့ကို ၇တနာရွှေအိုးလို့ …
ဒေါသကြီးသလို အစွဲအလန်းလဲကြီးတဲ့ စနေ သားသမီးတို့အကြောင်း
ဒေါသကြီးသလို အစွဲအလန်းလဲကြီးတဲ့ စနေ သားသမီးတို့အကြောင်း စနေသားသမီးတွေက လူ့ဘဝကို စရောက်ပြီ ဆိုကတည်းက စိတ်ကြီးတတ်ကြပါတယ်။ ဒေါသဖြစ်ပြီ ဆိုရင်လည်း အရာဝတ္ထု တစ်ခုခုနဲ့ ကိုယ့်အသားကို နာကျင်အောင် လုပ်တတ်တယ်။ ပြောချင်တဲ့စကားကို သွယ်ဝိုက် မပြောတတ်ဘဲ တိုက်ရိုက် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောတတ်တယ်။ အစွဲအလန်း ကြီးတယ်။ အမှတ်တရတွေကို သတိရနေတတ်တယ်။ ကိုယ့်အပေါ် ကောင်းတဲ့လူဆိုရင် လွယ်လွယ်နဲ့ မမေ့တတ်ကြဘူး။ ဒေါသကြီးရင်လည်း သူများနဲ့ မတူအောင်ပါပဲ။ စိတ်ကြီးတယ် မဟုတ်မခံတတ်ဘူး။ အချိန် ခဏလေးနဲ့ ဒေါသအရမ်း ထွက်တတ်ပေမယ့် ဟုန်းခနဲ ထတောက်တဲ့မီးလို ဒေါသတွေက ခဏပဲ။ ကြာကြာတော့ စိတ်ထဲမထားတတ်ဘူး။ ကိုယ့်ရှေ့မှာ သတ္တဝါတွေမြင်ရင် ချစ်တတ်တယ်။ သနားတတ်တဲ့ စိတ်ထားရှိကြတယ်။ …
ဆဲတဲ့အကျင့်လေးတွေ ရှိရင် ဒီပို့စ်လေးကို ဖတ်ကြည့်ပါ
ဆဲတဲ့အကျင့်လေးတွေ ရှိရင် ဒီပို့စ်လေးကို ဖတ်ကြည့်ပါ ” ပါးစပ်က ထွက်သော ထိုစကားကြောင့် ” တဲ့တစ်ခါကရဟန္တာထေရီမကြီးနှစ်ပါး ထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာတစ်ပါးက မေးတယ်။အသက်ကလည်း ငယ်တယ်၊ အရွယ်လည်းရှိပါရဲ့နဲ့ဘာ့ကြောင့်အိမ်ထောင် မပြုတာလည်းဆိုတော့ တစ်ပါးက သူ့ဇာတ်ကြောင်းကို ပြောပြတယ်။ သူဟာ ဘဝတစ်ခုမှာ ကုန်သည်တစ်ယောက်နဲ့လက်ထပ်ခဲ့တယ်။ပေါင်းသင်းပြီး မကြာခင်မှာဘဲ ယောင်္ကျားကကုန်ကူးသွားတော့ သူ့မှာ ကိုယ်ဝန်နဲ့ကျန်ခဲ့တယ်။ယောက္ခမတွေက သူ့သားနဲ့ ရတဲ့ကိုယ်ဝန်မဟုတ်ဘူး ဆိုပြီး နှင်ချလိုက်တယ်။ ဗိုက်တစ်လုံးနဲ့ ထွက်သွားခဲ့ရတယ်။ဇရပ်တစ်ခုရောက်တော့ ဗိုက်နာပြီးကလေးမွေးတယ်။ကလေးကိုဇရပ်မှာ ခဏထားပြီးရေသွားရှာနေတုန်း ခရီးသွားတစ်ယောက်ကစွန့်ပစ်ထားတဲ့ ကလေးဆိုပြီး ယူသွားတယ်။ဒီလိုနဲ့ စိတ်လေပြီး လျောက်သွားနေတုန်းဓါးပြဗိုလ်ကြီးနဲ့တွေ့ပြီး ပေါင်းသင်းခဲ့ပြန်တယ်။ မိန်းခလေးတစ်ယောက် မွေးတယ်။တစ်နေ့ ကလေးပုခက်ထဲက ပြုတ်ကျပြီးခေါင်းမှာ ဒဏ်ရာရလို့ ယောင်္ကျားကိုကြောက်ပြီးထွက်ပြေးခဲ့ပြန်တယ်။အဲဒီလိုနဲ့ တစ်ယောက်ထဲ နှစ်ပေါင်းများစွာလျှောက်သွားနေတုန်း ကုန်သည်လေးတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ပြီး အိမ်ထောင်ပြုလိုက်ပြန်တယ်။ အဲဒီ …
အသက်ကွာသူကို ချစ်မိတဲ့အခါ ရလာတဲ့အချက်များ
အသက်ကွာသူကို ချစ်မိတဲ့အခါ ရလာတဲ့အချက်များ အချစ်မှာ အသက်အရွယ်ဆိုတာမရှိဘူး နှစ်ဦးနှစ်ဘက် ချစ်ရင်ပြီးတာပဲလို့ ဆိုကြတယ် ။ တကယ်တမ်း ချစ်လို့ တွဲပြီဆိုတော့မှ ပြဿနာကစတာ ။ တစ်ခုပြီးတစ်ခုနဲ့ မဆုံးနိုင်တော့ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အသက်ခြင်း တအားကွာနေပြီဆို ဘဝဖြတ်သန်းတာခြင်းလည်း မတူတော့ပါဘူး ။ အမြင်နဲ့ခံယူချက်တွေကလည်းကွာကြတယ် ။ ဒီဒုက္ခတွေကတော့ အသက်ကွာလွန်းသူကို ချစ်မိသူတိုင်း ကြုံရတဲ့ဒုက္ခတွေပဲဖြစ်ပါတယ် ။ လွှမ်းမိုးခြင်း အသက်ကြီးတဲ့သူကလည်း သူကအကြီးမို့ သူပြောတာနားထောင်စေချင်တယ် ။ အနိုင်လိုချင်တယ် ။ ငယ်တဲ့သူကလည်း အငယ်မို့ ဆိုးနွဲ့ပြီးအနိုင်ရချင်တယ် ။ အလျှော့ပေးစေချင်တယ် ။ အကြိုက်မတူခြင်း ဒါ က လည်း သိပ် မ ဆန်း တဲ့ …
ဘယ်သူက “လူအ”လဲ (သို့) တစ်ခါစားမကြံတတ်သူ အကြောင်း
ဘယ်သူက “လူအ”လဲ (သို့) တစ်ခါစားမကြံတတ်သူ အကြောင်း ရွာ တစ်ရွာမှာ ထင်ရှား ကျော်ကြားတဲ့ သင်္ချာ ပညာရှင်ကြီး တစ်ယောက် ရှိတယ် ။ သူဟာ သင်္ချာပညာမှာ တော်လွန်းလို့ ဘုရင်ကတောင် သင်္ချာ ဘာသာအတွက် သူ့ကို ခေါ်ယူ တိုင်ပင်ရတယ် ။တနေ့မှာ ရွာသူကြီးက သူ့အိမ်ကို လာလည်ရင်း ခုလို ပြောတယ် ။ – “ခင်ဗျားကသာ ဘုရင်ရဲ့ အတိုင်ပင်ခံလို ဖြစ်နေတာ ခင်ဗျားရဲ့သားကတော့ ရွှေနဲ့ ငွေမှာ ဘယ်ဟာက ပိုအဖိုးတန်မှန်းတောင် မသိဘူး ။ ထူလိုက် အလိုက်တာ လွန်ရောဗျာ” တဲ့ ။ နောက်ပိုင်း မှာလည်း နေ့စဉ် …
ယောက်ျားတစ်ယောက် ထားသွားခံရလို့ မိန်ကလေးတစ်ယောက် ဘဝပျက်မသွားနိုင်ပါဘူး
ယောက်ျားတစ်ယောက် ထားသွားခံရလို့ မိန်ကလေးတစ်ယောက် ဘဝပျက်မသွားနိုင်ပါဘူး အဲ့ဒီ ယောက်ျားကို ချစ်နေသေးတဲ့စိတ်ကြောင့်သာ ဘဝ ပျက်စီးသွားမှာပါ မိန်းကလေးတစ်ယောက် အယုံကြည်လွယ်တယ်. ခံစားရလွယ်တယ် အားနာလွယ်တယ်.. အစွဲလမ်းကြီးတတ်တယ် ဆိုရင် နောင်တတွေနဲ့ အလိမ်အညာတွေပဲ ခဏခဏ ခံနေရမှာပေါ့ ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို ဘယ်တော့မှ ခွင့်လွှတ်ပြီး ရှေ့ဆက် လက်မတွဲပါနဲ့. အနေနီးမှုကို မလွန်ဆန်နိုင်ပဲ ဖောက်ပြန်တာဟာ အချစ်ကို ကိုးကွယ်တာ မဟုတ်ဘူး ယောက်ျားတစ်ယောက် ထားသွားခံရလို့ မိန်ကလေးတစ်ယောက် ဘဝပျက်မသွားနိုင်ပါဘူး မွေးရာပါ ဆင်ခြင်တုံတရား အားနည်းတာ. စာရိတ္တသက်လုံ မကောင်းခဲ့တာပါ ပြောချင်တာက. ဆန္ဒနဲ့ သိက္ခာကို ရွေးချယ်ရတဲ့အခါ သိက္ခာကိုသာ ဦးစားပေးပါ ယောက်ျားတစ်ယောက် ထားသွားခံရလို့ မိန်ကလေးတစ်ယောက် ဘဝပျက်မသွားနိုင်ပါဘူး1 …
Previous 1 … 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 … 88 Next